फोन स्लो भएर वाक्क हुनुभा छ ? फास्ट बनाउन यसो गरौ – Nepali Sanchar Network : An online News Network of Nepal and Nepalese in abroad
तपाईले मोबाइलमा डाउनलोड गरेकामध्ये सवै एपको क्षमता एउटै हुँदैन् । कुनैकुनै एपले निकै धेरै रिसोर्स प्रयोग गरिरहेका हुन्छन जसले गर्दा फोन स्लो भइरहेको हुनसक्छ । कुन एपले धेरै क्षमता उपयोग गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि प्लेस्टोरमा एउटा एप पाइन्छ जसको नाम हो- वाचडग टास्क म्यानेजर । यो एपले तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएकामध्ये कुन एपले धेरै रिसोर्स खाएको छ भन्ने देखाउँछ । त्यही आधारमा तपाईले त्यस्तो एप हटाउने निर्णय लिनसक्नुहुन्छ ।
how to make phone run faster, tips for phone running slow
फोन स्लो भएर वाक्क हुनुभा छ ? फास्ट बनाउन यसो गरौ added by admin on February 21, 2017